Shiinaha ayaa la saxeexday heshiiskii iskaashiga waddooyinka ee 137 Wadada 197 | RayHaber | raillynews
HomeDUNIDAAasiya86 ShiinahaShiinaha ayaa saxeexday heshiiskii iskaashiga waddooyinka ee 137 Wadada 197
17 / 11 / 2019 86 Shiinaha, Aasiya, DUNIDA, tareenka, GUUD, Headline
Ganu waxay la saxeexday heshiis iskaashi dalka
Dowladda Shiinaha waxay sii wadaa inay kordhiso ganacsiga ay la gasho wadamada qaatay mashruuca 'Belt Road project'. Maamulka Shiinaha ayaa la saxeexday heshiis iskaashi oo jiil ah oo loo yaqaan 'X GenX' Generation Road oo ay la leeyihiin waddanka 30 ee ururka caalamiga ah ee 137 intii lagu jiray Oktoobar. Ganacsiga Shiinaha ee ay la wadaagaan jeneraalada dalalka inta u dhexeysa Janaayo iyo Sebtember waxay gaarayaan bilyan 197 bilyan
Lix sano ka hor, gobolka Shiinaha wuxuu bilaabay inuu hirgaliyo waxa loogu yeero Jidka Wadnaha ama 1 Generation 1 Road Mashruuca wuxuu sii wadaa inuu kordhiyo ganacsiga ka dhexeeya waddamada. Ganacsiga sanadkan ee u dhexeeya 1 iyo trillion dollars inta udhaxeysa wadamada ogolaaday inay kaqeybqaataan shabakada ganacsiga ee laga dheereeyay Shiinaha ilaa Yurub iyo dowlada Beijing ayaa soo dhawaatay.
SAXIIXKA 197 SAXIIX
Maamulka Shiinaha ayaa la saxeexday heshiis iskaashi oo jiil ah oo loo yaqaan 'X GenX' Generation Road oo ay la leeyihiin waddanka 30 ee ururka caalamiga ah ee 137 intii lagu jiray Oktoobar. Ganacsiga Shiinaha ee Jinsiyadaha Wadada intii u dhaxeysay Janaayo iyo Sebtember waxay gaareen $ 197 bilyan oo doollar. Waxaa la ogsoon yahay in waddanku aqbalay mashruuca waddada loo yaqaan 'Generation Road project' ee u dhexeeya 950 iyo 65 illaa hadda.
Bayaanka maamulka Shiinaha ee ku aaddan qaab dhismeedka tareenka Belt Road China Laos, khadka tareenka Shiinaha Thailand, khadka tareenka xawaaraha xawaaraha sare ee Jakarta Bandung, iyo Dekadda Pakistan ee Gwadar iyo Piraeus Port ee Griiga waxay sii wadaan inay si guul leh u shaqeeyaan. Sida lagu sheegay bayaanka, baaxadda Mashruuca Waddada "Belt Road", waxaa la sheegay in illaa dhammaadka Oktoobar, ku dhawaad ​​kun kun adeegyada xadiidka xamuulka qaada ah ayaa laga fuliyay Shiinaha iyo Yurub.
source: Çinhab waa
Mashruuca Wadada Shiinaha ee "Belt wadada"
Khadka tareenka ee Shiinaha Laos
Qadka tareenka Shiinaha Thailand
Khadka tareenka xawaaraha sare ee Bandung ee Jakarta